Yes Nepali – News From Nepalमहामारीसँगै आक्रमण झेल्दै छन् नेपालगञ्जका स्वास्थ्यकर्मी - Yes Nepali - News From Nepal
२०७८ जेष्ठ १९ गते बुधबार, १४:१८ मा प्रकाशित
राँझा- नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालको कोभिड वार्डमा काममा खटिएका चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मीमाथि गत बिहीबार राति विरामीका आफन्तबाट आक्रमण भयो । अहिले यो घटना देशव्यापी रुपमा चर्चामा छ ।
भेरी अस्पतालमा पछिल्लो तीन हप्ताको अवधिमा चिकित्सक र नर्समाथि आक्रमण भएको यो चौथो पटक हो । यसअघि पनि आकस्मिक कक्ष र कोभिड कक्षमै पसेर विरामीका आफन्तलगायतले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए । ती सबै घटना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्युको विषयलाई लिएर भएको भेरी अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. सङ्केत रिजालले बताउनुभयो ।
भेरी अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा.रिजालले पहिलो घटना हुँदा पनि अस्पताल प्रशासनले कारबाहीका लागि निवेदन दिएपनि एक सातामै अभियुक्त छुटेको र त्यसपछि बिहीवार रातीसहित तीन घटना भएको बताउनु भयो । पहिलो पटक आक्रमण गर्ने दोषीलाई कारवाही नभएपछि अन्य पटक पनि घटना दोहोरिरहेकोले स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल कम्जोर बन्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
आक्रमणकारीलाई मुद्दा दर्ता, अस्पतालमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत गराउने निर्णयपछि आन्दोलन रोकिएको छ । घटनाको छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश थापाले जानकारी दिनुभयो ।